Timaha Gaaban ee Ragga | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, fashion, Timaha, Isbeddellada
Xirashada timo gaagaaban waa qodob aasaasi ah waxay u taagan tahay astaan ​​shaqsiyan iyo wax bixin aragtida ugu fiican. Kuma filna in la ogaado dhammaan qaababka iyo isbeddellada ka jira waddada, laakiin tan waa inaad ka fikirtaa timaha kugu habboon adiga oo kuxiran shakhsiyaddaada iyo gaar ahaan qaabka wejigaaga.
Haddii aad rabto inaad ka feejignaato moodada ugu dambeysa ee timaha gaaban halkan waxaan kaaga tagi doonaa kuwa ugu fiican ee dejinaya qaabka iyo asalka. Haddii markii shaki ku jiro aadan ogeyn inay tahay timahaaga saxda ah, waxaan ku siineynaa tilmaamo yar oo ku saabsan sida timo jarahaaga fiican uu noqon karo
1 Timo jare noocee ah ayaa ugu fiican?
2 Timo gaaban oo ragga ah
2.1 Timo gaaban oo leh kor u kacsan
2.2 Timo jarista
2.3 Qaabka taabashada
2.4 Gaabin gaaban
2.6 Timaha xiisaha leh
Timo jare noocee ah ayaa ugu fiican?
Haddii wejigaagu yahay oval: Wejigaagu waa mid wareegsan ama laba jibbaaran, oo leh dhabanno calaamadeysan iyo garka cidhiidhiga ah, waxaan kuu haynaa war wanaagsan, maxaa yeelay ficil ahaan dhammaan timo jarista ayaa si weyn kuugu muuqda.
Marka wejigaagu gebi ahaanba wareegsan yahay: Timo jarista qarinaysa wareegaas ayaa la doorbidaa, sidaa darteed timo jarista oo mug ku daraya xagga sare ayaa ugu fiican.
Haddii wejigaagu yahay wadno-eg: halkaas oo foodda ay aad uga ballaadhan tahay dhabannada, timo jarista oo si fiican ugu habboon timo-jaraha leh mugga wejiga iyo dhegaha.
Haddii wejigaagu dherer yahay: Iyada oo garka u ballaadhan yahay sida foodda, timo jaristu waa mid leh mug sare oo ka ilaalinaysa timo aad loo xiiray labada dhinac ee madaxa.
Wixii weji laba jibbaaran: Markuu daanka xagalkiisu aad u xagal badan yahay istaago, waa inaad dhinacyada madaxa si cadaalad ah u xiiran oo qaybta kore aad u gaaban.
Dhammaan timahan timaha hadda waxay abuurayaan isbeddel iyo wixii ka sarreeya dhammaantood waa kuwo aad u qurux badan dhalinyarada iyo dadka jecel inay noqdaan kuwo isbeddela oo dareema joornaal.
Timo gaaban oo leh kor u kacsan
Waa timaha oo had iyo jeer abuura isbeddel, Waa kan ugu dhaqsaha badan ee la gooyo, midka aan waligiis ka bixin qaabka iyo midka ku habboon ragga oo dhan. Qaabkani wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa dhammaan noocyada moodada, mid rasmi ah iyo mid aan rasmi ahaynba.
Iyada oo timaheeda dib loo xoqay: goos gooska wali waxtar buu leeyahay oo aad ayuu u gaaban yahay, laakiin qaybta kore xoogaa ayaa looga tagay oo dib ayaa loo shanlay.
Iyada oo garaacis horay loo socdo: Iyagu waa timo jarid halka darafka lagu ixtiraamo lagana saaray foodda hore. Noocyada timaha noocan ahi waa mid ka mid ah kuwa casriga ah ee wali ku jira moodada.
Goyntaani waxay ka kooban tahay tegitaan timo aad u gaaban oo dhinaca madaxa ah, labada dhinacba iyo xaga dambeba timo badana dusha kaga tag.
Qaabkani wuxuu caan ku ahaa horaantii qarnigii XNUMXaad wuxuuna ku xirnaa fasalada inuu hoos u dhaco iyo burcadda waddooyinka. Maalmahan waa timo muuqaal ah oo moodada ku jirta, waxay siinaysaa muuqaal dhalinyaro ah, cusub oo sasabasho leh.
Waxaa jira nooca caadiga ah oo leh dhinacyo aad u gaaban iyo timo dhaadheer oo dhaadheer dib ugu shanleeysan xagga sare. Nooca kale waa isku mid laakiin waa ka sii casriyeysan yahay, maadaama ay bixiso timo isku mid ah, laakiin qaybta sare oo aad u dheer iyo halka nooc ka mid ah sawirro laga sameeyay dhinacyada madaxa.
Waxay u egtahay timo jarista Undercut sidaa darteed way yeelan doontaa muuqaal isku mid ah laakiin dherer qurux badan leh, oo timaheeda tidicida xagga sare. Xikmad wanaagsan, waxaad ku ilaalin kartaa taabashadaada mid aan fiicnayn ama xitaa qaar ka mid ah qufuladaadu waxay u dhici doonaan dhinacyada. Waxaa jira taabashada lagu sameeyay timo jilicsan, halkaas oo aan weli kaga tagi doonno timaheenna ruxruxa ama timaha jilicsan ee la dhigay, iyada oo aan aad u dheereyn oo aan ku dhicin dhinacyada.
Qaabkan la jarjaray ayaa aad u gaaban waana wax aad u sasabasho badan kuwa leh timo aad u qaro weyn ama aad u jajaban oo is haysta. Dhinacyada madaxa si aad ah ayaa loo jaray dherer ahaan qaybta korena waxaa looga tagay hoos u dhac leh qaybta hoose. laakiin wax ka dheer
Timaha Dhinacyadu aad ayey uga gaaban yihiin madaxa korna waa dheer yahay. Muuqaalkeedu wuxuu matalayaa habka loo abuuro timo halka daryeel gaar ah lagu muujinayo halabuurkeeda iyo qaabkeeda waxaana xitaa lagu nuuxnuuxsaday inay ka tagto waji iyo muuqaal si fiican loo dhigay.
Timaha xiisaha leh
Timahaani had iyo jeer waxay ahaayeen moodo, ayaa dhiirigelin u ahayd dhalinyaro badan Waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah in waqtigaas ay dejisay isbeddel ka dhex jira qaar ka mid ah dadka caanka ah sida Zac Efron ama David Beckham.
In kasta oo timaha noocan oo kale ah had iyo jeer loo yiqiin inay yihiin ciriiri haddana waxaa lagu dari karaa qaab "faux haah" halka goosgoosku ahaado sidiisa oo kale inuu yimaado oo leh karbaash calaamadeysan oo dhinacyada ku yaal, inta udhaxeysa timo gaaban iyo dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timo gaaban oo ragga ah
Noocyada kabaha ragga
Hadiyadaha ragga guursaday